Kọmputa Assemblylọ Ọrụ Mgbakọ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Companlọ ọrụ Mgbakọ Kọmputa - PCBFuture
Keywords: PCB nzukọ ụlọ ọrụ, PCB rụpụta, Nzukọ sekit sekit, Ọrụ PCBA
PCBFuture e guzobere na 2009. Ọ ọkachamara na PCB n'ichepụta, PCB nzukọ na mmiri sourcing. PCBFuture gafere ISO9001: 2016 àgwà usoro, OA EU quality usoro, FCC usoro.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ chịkọbara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke PCB n'ichepụta, Mmepụta na mmebi ahụ, na ịdabere na ahụmịhe ndị a, na-enye nnukwu ụlọ ọrụ sayensị na ndị ahịa ahịa ahịa na ndị ahịa buru ibu na ndị na-azụ ahịa na-akwụsị ọrụ, ịgbado ọkụ, na nbipu nke arụ ọrụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu nke nwere ọtụtụ akwụkwọ bupute site na ihe atụ na batches Thisdị ọrụ a ka a na-eji n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche dịka nkwukọrịta, aerospace na ụgbọelu, IT, ọgwụgwọ ahụike, gburugburu ebe obibi, ike eletrik, na nkenke ule ule.
Kedu ụlọ ọrụ Mgbakọ Electronic?
Companieslọ ọrụ ndị na-ahụ maka kọmputa na-arụ ọrụ nke ịmepụta na ịnwale mgbakọ sekit ndị a na-ebipụta, mgbakọ ndị dị na USB, eriri eriri, eriri waya na bọọdụ sekit ndị a na-eji maka ngwaahịa eletrọniki n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ ebumnuche, ọ bara uru ịhapụ ndị ọzọ ka ha rụpụta ihe ndị a.
Uru nke ụlọ ọrụ mgbakọ na kọmputa?
Companieslọ ọrụ ndị na-ahụ maka kọmpụta na-enye mgbanwe maka obere ụlọ ọrụ nwere obere ọrụ yana belata nsogbu ndị mmadụ nwere. Kedu ihe ọzọ, ebumnuche ebumnuche nke ụlọ ọrụ nzukọ eletrọniki bụ ọkachamara na akụnụba buru ibu, gụnyere nrụpụta, ị nweta ngwongwo, na ịkọkọ ihe nchekwa gụnyere nka imepụta ụlọ ọrụ. Ha na-enyekwa ọrụ bara uru dịka imepụta injinia, nyocha arụpụta, nnwale arụmọrụ, ọrụ nchọpụta nsogbu yana ijikọ usoro. Nke a naputara ndi ahia ndi na achoghi imeputa ma debe onu ahia buru ibu nke ngwa ahia. N'ihi ya, ndị ahịa nwere ike ịzaghachi na mberede na-achọ ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè karị.
Mere họrọ anyị electronic nzukọ ọrụ:
All injinia nwere ihe karịrị 5 afọ nke PCB ahụmahụ.
Emebere ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ ngwa nrụpụta dị elu.
Ndị ọrụ ahụ nwere ọtụtụ mmepụta, nbipu na nyocha.
anyị nwere ihe ọ ga - ewe iji mezuo ọrụ gị chọrọ site na echiche gaa na mmepụta yana bụrụkwa onye ọrụ injinịa kọmputa gị zuru oke n'agbanyeghị agbanyeghị ma ọrụ gị pere mpe.
Anyị ipuiche ọhụrụ ngwaahịa iwebata na ọnụ ọgụgụ ka olu n'ichepụta, na-akwado dum ahịa imewe okirikiri na-akwalite ogologo okwu mmekọrịta.
1. RoHS Dabara PCB si.
2. Mmepụta RF PCB
3. Laser microvias, vias kpuru ìsì, vias vias
4. Nwa bekee eletrik ule
5. PCB Impedance ule
6. Oge ọsọ ọsọ
7. Elu ugwu technology
8. Thru-Oghere Technology
9. PCB ationgha na nzukọ
Ọrụ PCBFuture na-agwakọta ihe ngwọta zuru oke site na nhazi atụmatụ, na mmemme na arụmọrụ. Ọrụ ndị a ga-enyere gị aka ịbawanye asọmpi gị, site na nkwado ndị ahịa n'oge, njikwa njikwa, yana ọnụahịa dị mma, yana ụlọ ọrụ ntinye aka na nke pụrụ iche na mba na-akwụ ụgwọ.